Duufaanta kuleylaha ah ee Matthe oo noqotay duufaan Nooca 2aad ah | Saadaasha Shabakadda
Duufaanta kuleylaha ah ee Matthew waxay noqoneysaa duufaan Nooca 2 ah
Sawir - Wunderground.com
Duufaanta Tropical Storm Matthew waxay noqotay duufaan Nooca 2 ah, sida laga soo xigtay Xarunta Qaranka ee Duufaanta Mareykanka. Oo leh dabaylo isdaba joog ah 120km / h, Duufaanku waxay soo martay waddo aan caadi ahayn, iyada oo sii maraysa Aruba, Bonaire iyo Curaçao, oo ah jasiirado ku yaal Dutch Caribbean-ka oo ka baxsan waxa loogu yeero "suunka duufaanka", taas oo ah, waa gobollo aan dhacdooyinkan saadaasha hawadu badanaa gaarin.
Sidaas darteed, Matthew wuxuu ka tallaabay jasiiradaha koonfureed ee ugu yar yar Antilles Arbacadii, Khamiisti waxay noqotay duufaanno Qaybta 1 ah, maantana Jimcaha waxay noqotay Qaybta 2. Waqtigan xaadirka ah, waxaana rajeynayaa inaysan dhimashooyin dambe dhici doonin, waxaad ogtahay in qof ku dhintey bariga Caribbean-ka. Waxay sidoo kale waxyeelo yar ka geysatay Barbados, halkaas oo ay soo dejisay geedo badan halkaasna ay ka maqnaayeen.
Dowlada Kolombiya ayaa soo saartay a Digniinta duufaanka kulaylaha ee xeebtaada, laga bilaabo Riohacha illaa xadka Venezuela. Khatarta duufaanta waxay khadad dhaadheer ka sameysay xarumaha gaaska iyo dukaamada waaweyn, Curaçao waxaa dib loogu dhigay doorashadii baarlamaanka ilaa isbuuca soo socda.
Xilligan duufaanka ee Atlantic, oo bilaabmay Juun 1, saddex iyo toban duufaano kulaylaha ah ayaa samaysmay, kuwaas oo shan ka mid ahi noqdeen duufaanno:
Alex: Waxay ahayd duufaantii ugu horaysay ee samaysa Janawari badweynta Atlantik ilaa 1938, gaar ahaan 14-keed.waxay ahayd qaybta 1aad.
Earl: Duufaan cusub oo ka tirsan Qeybta 6 ayaa la sameeyay Agoosto 1.
Gaston: Agoosto 22, duufaankan ayaa sameysmay, waxayna gaartay qeybta 3.
Hermione: Waxaa la sameeyay Agoosto 28, waxayna ahayd qaybta 1aad.
MatthewWaxay noqotay Duufaan Nooca 1 ah Sebtember 29, iyo Qeybta 2 maalinta xigta.
La NOAA wuxuu ka digay in xilligan duufaanku ka dhacayo Atlantika inay xoogaa ka firfircoonaaneyso sida caadiga ah, iyadoo la sameynayo 12 ilaa 17 duufaanno, kuwaasoo inta u dhexeysa 5 illaa 8 ay noqonayaan duufaanno, iyo inta u dhexeysa 2 iyo 4 noocyada waaweyn ee duufaannada. .
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaanta kuleylaha ah ee Matthew waxay noqoneysaa duufaan Nooca 2 ah
Sida looga badbaado duufaanta
Fiiri doorashadayada qiimo dhimista ugu fiican